संविधान संशोधनमा आज मतदान, सांसद तान्न प्रधानमन्त्री सक्रिय – YesKathmandu.com
प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेभित्रका मधेसी सांसदहरुसँग पनि कुरा चलाइरहेका छन् । एमालेभित्रका केही दल र साना दलले संशोधनका विपक्षमा मतदान गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास लिएका छन् । उता संशोधनका विपक्षमा उभिएको एमाले र राप्रपा भने संशोधनका विपक्षमा उभिने भएको छ ।
One thought on “संविधान संशोधनमा आज मतदान, सांसद तान्न प्रधानमन्त्री सक्रिय”
आफ्नो पहिचान मेटेर लम्पसार भएका दल र नेताहरूको केही भरोषा हुदैन ! ताक परे तिवारी नत्र गोतामे हुन् ! अपनत्व हराएका मालिकको मोल खाएर मुलुकलाई रसातल पुर्याऊन आतुर भातमाराहरूले भात प्यारो अवस्य मान्नेछन् !
वीरगञ्ज नाकामा पुनः आन्दोलनकारीद्वारा अवरोध
कांग्रेस-माओवादी सत्ता बाँडफाँडमै ब्यस्त, तुफानी बेगमा एमाले राहतको राजनीति लिएर मधेस झर्‍यो